अभिनेत्री सुपुष्पाको यतिकै-यतिकै प्रेम बस्यो अनी मागी विवाह भयो Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
अभिनेत्री सुपुष्पाको यतिकै-यतिकै प्रेम बस्यो अनी मागी विवाह भयो
काठमाडौँ : ‘रणवीर’ फिल्मबाट नेपाली रजत पटमा डेव्यु गरेकी अभिनेत्री हुन् सुपुष्पा भट्ट। पहिलो फिल्मबाटै अभिनयको चर्चा पाएकी सुपुष्पाले दीपाश्री निरौलाको ‘छ माया छपक्कै’बाट थप चर्चामा आइन्। उनले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ प्रदर्शनको तयारीमा छ।
चलचित्रमा अभिनयसँगै थुप्रै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् उनले। अभिनेत्री सुपष्पाले गत असार १८ गते चलचित्र निर्माता रौनक विक्रम कँडेलसँग विवाह गरिन्। निर्माता कँडेलले चलचित्र ‘कबडी, र मिस्टर झोले’ निर्माण गरेका छन्। अभिनेत्री भट्टसँग उकेराकर्मी भेला अधिकारीले गरेको कुराकानी :
विवाहपछिको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
ठिकै छ। निषेधाज्ञा हुनुभन्दा अघि केही चलचित्रका स्क्रिप्टहरू पढेको थिए। चलचित्रका लागि अफर पनि आइरहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण अहिले खै काम अगाडी बढेको छैन। यस्तो बेलामा के चलचित्र छायाङ्कन होला र?
चलचित्रको काम नभए पनि म्युजिक भिडियोको काम त आइरहेको होला नि ?
छैन। अहिले त्यतिकै घरमा नै बसिरहेको छु।
हालसालै विवाह गर्नुभयो। पारिवारिक जीवन र अभिनय यात्रालाई कसरी सँगसँगै लैजाने योजना छ ?
समय मिलाउन त्यति गाह्रो छैन। चलचित्रमा काम गर्न घरबाट मलाई कसैबाट रोकतोक छैन। श्रीमान् पनि चलचित्र क्षेत्रकै हुनुहुन्छ। घरमा बुझ्ने मान्छे भएपछि त गाह्रो हुन्न नि।
बुहारी भइसकेपछि अलिक कठिन होला नि ?
मलाई केही कठिन छैन। चलचित्र क्षेत्रमा नै लाग्नुभएको श्रीमान् हुनुहुन्छ। सासु-ससुरा पनि बुझ्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चलचित्रका बारेमा सबै थाहा छ।
जीवनसाथी फिल्म लाइनकै छान्नुभयो। प्रेम विवाह त होला हैन ?
हजुर, पहिला प्रेम, त्यसपछि मागी विवाह।
कति वर्ष चल्यो प्रेम ?
त्यस्तै छ ,सात महिना।
पहिलो प्रस्ताव कताबाट आयो?
साथीहरूबाट कुरा चलेको हो। साथीहरूबाट कुरा चल्दै गएपछि मैले पनि उहाँलाई बुझ्दै गए। बिस्तारै बोलचाल र भेटघाट हुन थाल्यो। त्यसपछि उहाँ मेरो घरमा माग्न आउनुभयो र हाम्रो विवाह भयो। अव कसले प्रस्ताव राख्यो भन्नु। यतिकै-यतिकै प्रेम बस्यो भन्नुपर्‍यो ।
धेरै अभिनेत्रीहरू विवाहपछि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय हुन सकेको देखिँदैन। क्रेज पनि घटेको देखिन्छ। विवाहपछि अभिनय यात्रा अलि गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन ?
चलचित्र क्षेत्रमा कहिल्यै ब्रेक हुँदैन। यही क्षेत्रले नै मलाई चिनाएको हो। चलचित्र क्षेत्रमा कसरी ब्रेक हुन सक्छ र ?
२०७८ साउन ०२ गते १३:३१ मा प्रकाशित
अभिनेत्री नम्रताको प्रश्न : मैले बिहे नगरी सिङ्गल मदर हुन्छु भन्न किन नपाउने ?
२०७८ साउन ०९ गते १८:५६ मा प्रकाशित
आजभोलि केमा व्यस्त हो ? कोरोनालेगर्दा चलचित्र, इभेन्टहरू ठप्पै छ। लकडाउन खुलेपछिका दिनमा म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त छु। अहिले म्युजिक भिडियोहरू पनि धेरै बन्दै छ ।....
पशुपति शर्माको गण्डकी सलल, अन्जु पन्तको छटपटी
२०७८ साउन ०९ गते ११:४१ मा प्रकाशित
पशुपति र रचनाको ‘गण्डकी
कोरोना खोपको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे कलाकार
२०७८ साउन ०८ गते १८:३२ मा प्रकाशित
आज (शुक्रबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर कलाकारले प्रधानमन्त्री देउवासँग खोपको माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको सुभेच्छुक संस्था नेपाल सांस्कृतिक संघको नेतृत्वमा झण्डै ६० जना....
सातै प्रदेशमा मिनी फिल्मसिटी बनाउने तयारी
२०७८ साउन ०५ गते १४:२५ मा प्रकाशित
बागमती प्रदेशको दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने योजना छ। बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक छायांकन स्थल निर्माणको तयारी भइरहेको बताए। उनले राजधानीको आसपास साँगा....
२० वर्षपछि पुनः रेकर्ड गरिएको ‘तिम्रो मन बदलिएछ’ गीतको भिडियो युट्युबमा
२०७८ साउन ०४ गते १५:१९ मा प्रकाशित
निकेश खड्काले निर्देशन गरेको भिडियोमा ‘बले’ पात्रबाट परिचित हास्य कलाकार सागर लम्सालसँगै टिकटकबाट चर्चामा आएका दिदीबैनी प्रिज्मा–प्रिन्सी खतिवडाले अभिनय गरेका छन्। यस्तै, आकाश कार्की, जीवन....